MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဇခုန်တိန်းယိန်းအကြောင်း စုစည်းတင်ပြချက်
(Myitkyina Blog တွင် တင်ထားသော ဇခုန်တိန်းယိန်း၏ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် စုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ လူမျိုးဗီဇကို သေခြာမသိပါ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါ။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပို မဖြစ်ပါ။
ဦးတ်ိန့်ယိန်း ပါဝင်ခဲ့သောအဖွဲ့အစည်း၊ သူခေါင်းဆောင်ခဲ့သော အဖွဲ့၏နောက်ခံသမိုင်း ကိုလေ့ လာ ကြည့်သည့်အခါ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် အထက်ကိုဆန့်ကျင်၊ အောက်ကိုခြေကိုဖိနှိပ် သူဖြစ်သည်ဘယ်သူ့ကိုမှအကောင်းမြင်သူမဟုတ်ပါ။ သူကိုတိုင်အသိဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သူနှင့် အတူအနှစ်လေးဆယ်ကျော် သေတူရှင်တွဲ ပေါင်းခဲ့သော ရဲဘောဟောင်းများရင်ထဲ ခံစားနေ ကြပါသည်။ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းကို အသက်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ရဲဘော်များကို တောင် ရန်သူလိုသဘောထားဆက်ဆံလာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အင်မတန်အထင်ကြီးသော လူကြီးဖြစ်သည်။ အကုန်ပြောရလျှင် နိုင်ငံတော်အစိုးရလူကြီးများကိုတောင် အထင်ကြီးသူမဟုတ်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမဦးဆုံး ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တာလည်း ဦးဇခုန်တိန်းယိန်းပါ။သူလောက် တော်တဲ့လူ ခတ်ရှားရှားပဲဆိုပြီး အချိန်ကုန်မှန်းမသိ ကြွားဝါဟောပြောနိုင်သူဖြစ်သည်။
ဦးဇခုန်တ်ိန့်ယိန်းအမြဲ ကြွားလုံးထုတ်၊ သူ့ဇနီးဒေါ်ခေါနာမ် လည်းဘုမသိဘမသိ လေလုံးကြီး၊ ကချင်အထူးဒေသ(၁) ကိုဖွဲ့ဖြိုးအောင် လုပ်ထားတယ်တဲ့၊ ဒေသထွက်မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတမှ ၀င်ငွေနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ခဲ့ပါက ဒေသတခုလုံး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အဆောက်အအုံများ မြို့နှင့်မခြား တည်ဆောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူများဒေသနှင့် နှိင်းယှဉ်လျှင် ကျွန်တော်တို့ဒေသသည် ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း တည်ဆောက်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးဘာမှမရှိပါ။ သူတို့မိသားစု၏ တိုက်ကြီး တာကြီးတွေ လောင်းကစားရုံ ဥယာဉ်ခြံမြေတော့ လက်ညိုးထိုးမလွဲပါ။
ယခုဒေသတွင်းဖောက်လုပ်ထားသော လမ်းတံတား၊ပညာရေးကျောင်း၊ဆေးပေးခန်းများသည် ဒေသထွက်သံယံဇာတမှ ၀င်ငွေအနည်းအကျဉ်းနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပါဝင်ပူးပေါင်းငွေများဖြင့် တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်ပါသည်။ ဒေသထွက် သံယံဇာတ ၀င်ငွေမှ- တပုံမှာ တရုတ် ကန်ထရိုက်တာများ ယူသွားသည်။ တစ်ပုံမှာ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း မိသားစုပိုင်ဆိုင် သွားသည်။တစ်ပုံမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စာရင်းပြသည်။ စာရင်း ကို ဘယ်သူမှ စစ်ဆေးခွင်ရှိတာမဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံတော်မှပံပိုးသော ငွေကြေး ရုတ်ဝထ္ထုပစ္စည်းများ မြေကွက် မိသားစုဆွေမျိုး အုတ်စုပိုင်လုပ် သည်။ဒေသခံမိဘပြည်သူများ ရဲဘော်များကို လူနုံလူအ များလို့ထင်ပြီး ဖိနှိပ်လာခဲ့တာ ယနေ့ထိဖြစ်ပါ သည်။ ကချင်အထူးဒေသ(၁) ကို ပျက်ဆီးအောင် နည်းမျိုးစုံဖန်တီးခဲ့သော တရားခံလည်း ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယ်ိန်း မိသားစုနှင့်၎င်းဆွေမျိုးအချို့ ဘယ်ကရသည့်ရွှေငွေနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြပါ သနည်း။
ယနေ့ဦးဇခုန်တိန့်ယ်ိန်း မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးအချို့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ် တိုက်ကြီးတာကြီး ချမ်းသာနေခြင်းသည်-
ဒေသခံ မိဘပြည်သူများ၊ အိုးအိမ်စွန့် ဒုက္ခမျိုးစုံခံခြင်းကြောင့်-ရဲဘော်များ အသက်စွန့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါစွန့် ပေးလှူမှုမျိုးစုံကြောင့်- ကြွယ်ဝချမ်းသာနေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း မိသားစု အိမ်မက်တောင်မက်နေကြသလား?
ဒေသခံပြည်သူများ၊ရဲဘော်ဟောင်းများ ဆင်းရဲခက်ခဲလွန်းသဖြင့် အကူအညီတောင်းခံသည် အခါတော့-ဆဲလိုက်ဆိုလိုက် ငေါက်လိုက် ခြိမ်းခြောက်လိုက်.. ၀မ်းနည်းမျက်ရည်နှင့် ပြန်ခေါက်သော မိဘပြည်သူများ ရဲဘော်ဟောင်းများ ရှိနေကြသေးသည်။ နိုင်ငံခြား တရုတ်မတယောက်ကိုတော့ ယွမ်ငွေ သ်ိန်း(၄၀) လေးဆယ် ထုတ်ပေးလိုက်သည်ဆိုသည့် သတင်းလည်းကြားနေကြပါသည်။
ဒုတိယဇနီး ဒေါ်ခေါနာမ် လည်း အမျိုးသမီးများကို ခေါ်ယူစည်းဝေး၍ တောင်ပြောမြောက်ပြော ဝေဖန်ပုတ်ခတ် ရှေ့နောက်ဆင်ခြင်တတ်တာမဟုတ် ပြောလိုက်တာမှ ငါတို့မိသားစုကို ဘုရားသခင် အရမ်းမစတယ် နည်းနည်းလုပ်ရင် များများရသည်တဲ့၊
ပြောသေးသည် ဦးဇခုန် ဟာခင်များတို့ကို ဘိန်းစိုက်ပျိုး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖို့ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားသည်။ ကေအိုင်အေ လာရင်လုပ်ရတော့မည်မဟုတ်တဲ့၊ ကြားရသူများ ဘယ်လို ခံစားကြမလဲ ၀ိုင်းစဉ်းစားကြပါ။
-ရွှေငွေသာ ရရင် ဘာမဆိုမက်သည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း ဘယ်သူတွေကို ဂရုစိုက်သလဲ?
-ငွေကြေးရှာပေးသူ၊ ငွေလာပုံအော အခွင့်အရေးတောင်းခံသူ
-မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေးမှာ စိတ်ချရသူ
-သားမယား ပေါင်းနိုင်သော တရုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲ ရောင်းဝယ်သူများကိုဘဲ ဂရုစိုက်သည်။ တခြားဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်သည်မဟုတ်ပါ။
ကချင်အထူးဒေသ(၁) ကျွန်တော်တို့ဒေသ ဘာကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သားကောင်ဖြစ်လာရ သလဲ? လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၀ အရှေ့ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ဒေသသည် မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းရှင်းသော ဒေသဖြစ်သည်၊ နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း တိုးများလာ သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး တားမြစ်လှုပ်ရှားမှုကို အကြိမ်ကြိမ် ငွေကုန်လူပန်းလုပ်ခဲ့သည်၊ မရဘူး တရုတ် ပြည် ထ်ိန်ချုံး၊ ပေါင်ရှန်၊ နို့ကျန်း တို့နှင့်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေး ဆွေးနွေး လက်မှတ်ရေးထိုး အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သည် မရဘူး၊ ဘာကြောင့်လည်း ဒေသတခုလုံးကို ခေါင်းဆောင် နေသော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ-မူးယစ်ဆေးဝါးကို တကယ်ကင်းစင်ချင်သော ဆန္ဒမှမရှိပဲ၊ ဆန္ဒမရှိယုံမက မိမိကိုယ် တိုင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီ သုံးစွဲမှုကို အာသန်နေခြင်းကြောင့်ပါ။ ပါးစပ်က မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးတိုက်ဖျက်ရေး ဟောလိုက်တာ အာပေါင်အာရင်း ရေးဖြန့်တဲ့စာရွက် ပလူပျံပြောသေးသည်-ငါကရလို့သုံးစွဲသည် ခင်များတို့ကဘာရှိကြသလဲ? ငါ့ကို လာမပြိုင်ကြနဲ့တဲ့။
ပြည်သူလူထုနှင့် အောက်ခြေရဲဘော်များ ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများ (ဘယ်လမ်းကိုလိုက်မလဲ ဘယ်အဖြေကိုပေးမလဲ?) ကနေ့ ဒေသတခွန်ခေါင်းဆောင်ကြီးပေးခဲ့သော အမွေကို ကောင်းကောင်း ခံစားနေကြပါပြီနော်။
အမြင်မတူ ငါ့ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ပြီး အနှစ် (၄၀) ကျော်အေးအတူပူအမျှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များကို၊ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခြိမ်းခြောက်၊ အိမ်သိမ်းခြံသိမ်း နေနှင်ဒဏ်ပေးခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သူများမဟုတ်၊လက်နက်ခဲယမ်းရောင်းဝယ်သူများမဟုတ် ဘာအမှားမှ ကျူးလွန် သူများမဟုတ်ကြပါ။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း နဖူးပေါ်လက်တင် ကောင်းကောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခင်များခေါင်းဆောင်မှုကို ထောက်ခံအားပေး ကာကွယ်ခဲ့သည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ခင်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သွားတာ ဘာကြောင့်လည်း၊ ကျီးကန်းဟာ ၀က်မ မဲတာကိုတော့ မြင်တယ်တဲ့ သူဘယ်လောက်မဲတာ ကိုတော့ မမြင်ဘူးတဲ့။
အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် မှူးယစ်ဘုရင် ဦးဇခုန်တိန်းယိန့်၏ လုပ်ရပ်တချို့ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
၁၉၉၆ ခုနှစ် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၊ မူဆယ်မှ ကျန်းဆန်း၊မုံဂိုမှ ယန်ခိုင်း၊ လဂွယ်ဘောမ်လန်းတို့ ကမ်ပိုင်တီ ရွာနားတွင် ဘိန်းချက်စက်ရုံ တည်ဆောက်ပြီး ဘိန်းဖြူ၊ ယာမဆေးပြားများ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ သည်။
၄င်းနှစ်မှာဘဲ အကူတပ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီး ကျွန်တော်တို့ဒေသတွင် ဘ်ိန်းမစိုက်ရင် သူများ၏ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သည့် ဈေးကွက်ဖြစ်လာမည်ဆိုပြီး အကြောင်းပြကာ ၄င်းအကူတပ်ကို လျူချီခေါ်ဇခုန်ဇော်ရာ ဦးစီးပြီး ၀လိုင်းကူးဒေသတွင် ဘိန်းစိုက်ကြသည်။အရပ်သားပြည်သူများ ကိုလည်း အရင်းအနှီးထုတ်ပေးပြီး စိုက်ခိုင်းကြသည်။
ကမ်ပိုင်တီတွင် တည်ဆောက်ထားသော ဘိန်းချက်စက်ရုံ လုံခြုံမှုမရှိ ပေါက်ကြားလာသဖြင့် နယ်စပ်မှတ်တိုင် အမှတ် (၆) နား ပြန်ချက်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ထားချိန် ဗမာစစ်တပ်၊ KIA ၊ NDA တပ်များပူး ပေါင်းပြီး သိမ်းဆည်း၍ မြစ်ကြီးနားမြောက်ပိုင်းတိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မှူးယစ်ဆေး ချက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုဆေးအမျိုးပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည်။ု မသယ်နိုင်၍ ဖျက်ဆီးခဲ့တာ လည်းအများကြီးဖြစ်သည်။
ဆဒုံးပါ၊ ကမ်ပိုင်တီ၊ ပန်ဝါ၊ ဆောဇမ်၊ ဖီမော်၊ ကန်းဖန့်၊ ဖရဲ လမ်းခွဲ များတွင် တရုတ်ကုန်သည်များ နှင့်ပေါင်းပြီး ဟိုတယ်၊ လောင်းကစားရုံများကို ဆယ်စုနှစ်အချို့ မြေဌားရမ်းတည်ဆောက်ပြီး မှူးယစ် ဆေးရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးကြသည်။
ယခုချိန် ဘိန်းစိုက်ရာနေရာများသည် ကမ်ပိုင်တီဒေသ ဒွန်ဘန်ခူးဒေသ၊ ၀လိုင်းကူးဒေသ၊ နော့ဂိုဒေသ၊ ရှငေါ်ဒေသ၊ တမူးဒေသ၊ ချီဖွေဒေသ ဖြစ်ပြီး ဆော့လော်ပန်ကျီဒေသ အထိကူးစိုက်သွား ပြီဖြစ်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်သုံးစွဲမှုသည် အရင်မကြားဘူးမမြင်ဘူးသည့် ထော့လန်ဒေသ၊ လန်ဆယ်ဒေသ အထိပြန့်နှံသွားပြီဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်လူရွယ်များ နယ်ခြားစောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲ၍ နေ့တိုင်းလိုလိုသေဆုံးသူ များ ပိုမိုများများလာနေပါသည်။မျော်ကျောင်းဒေသဆို ယောင်္ကျားလေးများမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကမ်ပိုင်တီဒေသ ဘိန်းမစိုက်သောအိမ်ထောင်မရှိသလို ပန်ဝါဌာနချုပ်ရှိရာ အိမ်ထောင်တိုင်းလို မှူးယစ်ဆေးသုံးစွဲ ရောင်းဝယ်တတ်နေကြပြ်ီဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်တချို့ မှူးယစ်ဆေးသုံးစွဲ၍ ဘ၀ ပျက်သွားတာလည်း ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
မှူးယစ်ဆေး ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ဟန်ပြ အမိန့်ထုတ်ထားပြီး အနည်းအကျင်း ရောင်းဝယ်သူ များကို သာ အရေးယူဟန်ပြပြီး ကီလိုအမြောက်အများ ပိသာလိုက်ဖမ်းဆီးမိရင် ဇခုန်တိန့်ယိန်းကို သွားပြောရင် အားလုံးပြန်ပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် တာဝန်ရှိသူများလည်း ဖမ်းဆီးခြင်း မလုပ်ချင်ကြ တော့ပါ။
ဖမ်းဆီးရမိထားသော ဘိန်းစိမ်း၊ဘိန်းဖြူ၊ ယာမဆေးပြားများ သက်ဆိုင်ရာသို့အပ်ပေးခြင်း၊မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းလည်းလည်း တစ်ခါမှမတွေ့ရ။
လူကြီးများကိုယတိုင် မှူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုနှင့် မကင်းကြပါ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း ကိုယ်တိုင် လည်း မှူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူဖြစ်ပါသည်။ ယခု လွတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်တောင် ခေါပုတ်ထဲမှာထည့် ပြီး စားသုံးနေကြောင်း သူနှင့် အတူညီလာခံတက်ရောက်နေသူ တစ်ဦးမှသိရသည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် တရုတ်နယ်စပ်မှတ်တိုင် (၅) အနီး မှူးယစ်ကိစ္စနှင့် ရောက်လာသော တရုတ်ရဲ ၄ ဦး ကို ပစ်သတ်သည့် ကိစ္စ၊တရုတ်ပြည်မှ ဖေါ်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပစ်သတ်သူများကို ကာကွယ်ဖုံးခဲ့သည်။
၄င်ကိစ္စပေါက်ကြားသွားမှာစိုးလို့ ကမ်ပိုင်တီ ရုံးစိုက်ထားသော တရုတ်ပြည်ထင်ချုံး ဒုခရိုင်မှူး အဖွဲ့ကို ၅ ရက် အတွင်းထွက်သွားရန်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိပန်ဝါဒေသတိုက်ပွဲတွင်လည်း မှူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသော အရပ်သားလူငယ်များ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ သမီး ဇခုန်ယိန်းမျှော်နှင့် ဝေါဆောင်ဟောင်းခေါင် အိမ်နေ ဖုတ်လောက်ဒေါင်ဟောင်း တို့ မှူးယစ်ဆေးထုတ်ပေးပြီး တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကြောင်းကြားသိရ။
မိဘပြည်သူများ ခင်များ ဗမာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက် မှူးယစ်ဘုရင်များကို အပြစ်ပေး အရေးယူခြင်း ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ဘူး ယခု အရပ်ဝတ် စစ်အစိုးရ ကြီးမှူးသော အစိုးရလည်း ဘာမှလုပ် မှာမဟုတ် မှူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု့၊ ရောင်းဝယ်မှု့ မရှိခဲ့ရင် ရဲများ၏ ၀င်ငွေများလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါ ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် အမတ်မင်း၊ အမတ်ဝန်၊ ပါလီမန် ကိုယ်စားလှယ် ဟူ၍ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ဓါတ်ရှင်မင်းသားကြီးဆံဆံ၊ ကယ်တင်ရှင်ဆံဆံ၊ တိုက်ပုံအင်္ကျီ တောင်ရှည်ပုဆိုး၊ ညာချ ခေါင်းပေါင်း၊ ရှူးဖိနပ် တဒေါက်ဒေါဏ်ဖြင့် လူထုရှေ့တွင် ဟိတ်ဟန်အပြည့်ဖြင့် ဇတ်ကခဲ့ကြသည်။ အမတ်မင်းအားလုံးသည် လူထုအကျိုးဆောင်ရွက်ကြသူ မဟုတ်၊ မိမိကိုယ်ကျိုး ကောင်းစားရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကာလရောက်တိုင်း လူထုရှေ့ထွက် မဲဝယ်ခဲ့သည့် သူတော်စင် ယောင်ဆောင်များဖြင့်သာ ပြည့်နှက်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် လွှတ်တော်ခေတ်အဖြစ် တလှည့်ပြန်လည်လာပြီ ဖြစ်သည်။ သူတော်စင် ယောင်ဆောင်သူများ လက်ခမောင်းခတ်ချိန် ပြန်ရောက်လေပြီ။ ယခုလွှတ်တော်သည် “ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေပါ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အခိုင်းအစေ တွေပါ ” ဟု အရှက်မရှိ ပြောဆိုမြဲ ပြောဆိုနေသော ခြင်္သေ့အဖွဲ့၊ ယင်း၏ မဟာမိတ်ပါတီများဖြင့် ခန်းမပြည့် နေရာယူထားသည့် လူခ၀ါချ (ငွေမဲမှ ငွေဖြူ ခ၀ါချသကဲ့သို့) နေသော လွှတ်တော်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ အချို့(အနည်းငယ်သော) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လူထု၏ ကိုယ်စားပြုသော ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စင်ဘောင်အရ လူထု၏တောင်းဆိုမှုသည် လွှတ်တော်အတွင်း မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုသည် တပ်မတော်အစိုးရနှင့် အပေးအယူရယူကာ မထင်မှတ်ဘဲ လွှတ်တော်ခုံတန်းသို့ ကြောင်တောင်တောင် ထိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအုပ်စုထဲတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူများ၊ လက်နက်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သို့ လက်နက်မှောင်ခို လုပ်နေသူများ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲ (ဘိန်းစွဲ)သူများ၊ အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တရားမ၀င် စီးပွားရေး သောင်းကျန်းနေသူများ၊…စသည့် မာဖီးယားဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင်အများအပြား ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည်လည်း အထက်ပါ လွှတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ် သူတော်ကြောင်အုပ်စုတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် KIO စတင်ဖွဲ့စည်းစတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ၁၉၆၈ ခုနှစ် ခန့်မှစ၍ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ယုံကြည်လက်ခံကာ၊ ဗကပ အာမံခံအဖွဲ့ဝင်၊ ကေဒါတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် ယခုအထိ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တင်းပြည့်ပါတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဗကပ အမှတ်(၁၀၁) စစ်ဒေသအဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ အချို့သော စစ်ဆင်ရေး များတွင် KIA နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် KIO သည် ပန်ဝါဒေသ၊ ကန်ပိုင်တီဒေသတွင် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းတပ်ဖွဲ့ အခြေချနိုင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဗကပ ဗဟိုပြိုကွဲသောအခါ အမှတ်(၁၀၁)စစ်ဒေသသည်လည်း ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် (New Democratic Army – Kachin) NDA-K အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် လက်ညိုးညွှန်ရာ ရွှေဖြစ်စေသော အာဏာရှင်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား၊ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများ လွတ်မြောက်ရေး၊ လူတန်းစား တိုက်ပွဲ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဖြင့် စည်းရုံးကောင်းခဲ့သူ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် အာဏာလက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြုနိုင်လာသောအခါ သရုပ်မှန်ပေါ်လာတော့သည်။ သူ၏ အာဏာတည်ဆောက်ရေး ဗျူဟာအဖြစ် ဒေသခံ မရူ(လေါ်ဝေါ်)နှင့် လရှီ(လချိလ်)လူမျိုးစုအကြား အပြန်အလှန် မယုံကြည်မှုဖြစ်စေပြီး အချင်းချင်း ရန်စောင်စေရန် ဖန်တီး ခဲ့သည်။ လရှီ(လချိလ်)နှင့် လီဆူးလူမျိုးစု အချင်းချင်းလည်း ထိုကဲ့သို့သော မယုံမသင်္ကာဖြစ်စေရန် မီးစမွေးခဲ့သည်။
(ဤရှုပ်ထွေးသော ဖြစ်ပျက်မှုများကို သူ၏ ရဲဘော်ဟောင်းများ၏ ရင်ဖွင့်ရေးသားချက် တွင် ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။)
သူ၏ တပ်ဖွဲ့ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ပန်ဝါဒေသ၊ ကန်ပိုင်တီဒေသအနှံ့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို အကြီးအကျယ် ဇောက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် န၀တ စစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ ဇာတ်သရုပ်သဏ္ဍာန် ပို၍ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ရန် ကိုယ်ပိုင်ခါးပိုက်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ ထားရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်ရံတော် တပ်ဖွဲ့ကိုလည်း သီးခြား ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကြေးစား လက်မရွံ့သမားများကိုလည်း မွေးမြူထားခဲ့သည်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကို အကျယ်တ၀င့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ ဘိန်းဖြူချက်လုပ်ကာ ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုး သူများမှလည်း ဘိန်းစိမ်းအခွန်ကို နှစ်စဉ် တန်နှင့်ချီ၍ ကောက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်လည်း ရာဘဆေးပြား ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယင်းသတင်း ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် န၀တ အစိုးရက ဖမ်းဆီးဖျက်သိမ်းပြခဲ့သည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးသည့်နောက်တွင် လက်နက်ငယ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ကာ လက်နက်များကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခု၏ သူပုန်အဖွဲ့များသို့ လက်နက်မှောင်ခို ရောင်းချခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် NDA-K သည် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်အခါ လက်နက်သိုလှောင် ရုံမှ လက်နက်များကိုလည်း ထပ်မံရောင်းချခဲ့သည်။ ရောင်းရငွေများသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေအဖြင့် သိမ်းပိုက်ကာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား အစရှိသည့် မြို့ကြီးများတွင် အိမ်တော်များ ဟော်တယ် များ၊ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ သား တစ်ဦးသည်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ် ရောင်းချငွေ၊ လက်နက်မှောင်ခို လုပ်ငန်းတို့မှ ရရှိသောငွေကြေးဖြင့် မနောမြေ FC ဘော်လုံးအသင်းကို ထူထောင်လျက်ရှိနေသည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ ပန်ဝါနေအိမ်မှ သိမ်းဆည်းရမိသော လက်နက်ငယ်(၄၈၁)ပုံ
ပန်ဝါဒေသအထက် လဂွေ၊ ဖီမော်၊ ဖရဲ ဒေသများတွင် န၀တ ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် လက်ဝါးချင်းရိုက်ကာ အလွန်ရှားပါး၊ အဖိုးတန်သော မိုလစ်ဒီနမ် (Molybdenum) သတ္တုများကို တရုတ်ကုမ္ပဏီများဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ရရှိလာသော ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အားလုံးသည် သူနှင့်သူ၏ ဆွေးမျိုး မိသားစုများသာ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ တော်လှန်ရေးကာလ ဆိုးတူ ကောင်းဘက်၊ ရဲဘော် ရဲဘက် များမှာမူ မည်သည့်အကျိုးမှ မခံစားကြရပေ။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဟု အမည်တပ်ဆင်ထား သော်လည်း ပြောပလောက်သော မည်မည်ရရ ဘာမှမရှိချေ။ ဤသည်ပင်လျှင် NDA-K တပ်အတွင်း မကြခဏ အာဏာဖီဆံမှု၊ လုပ်ကြံမှု၊ အသင်းကွဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သောဒေသရှိ လူငယ်၊ လူရွယ်၊ လူအို များ သာမက အမျိုးသမီးများပါ မကျန် ဘိန်းသုံးစွဲသူ များပြားလာကာ အချိန်မတိုင်မီ သေဆုံးမှုနှုန်း မြင့်မားခဲ့သည်။ ဒေသခံလူထုမှ ယင်းပြဿနာကို တင်ပြခဲ့ကြသော်လည်း အချီးနှီးသာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလအတွင်း မှ စတင်ကာ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သည် ပန်ဝါဒေသသို့ စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ကာ ၀င်ရောက်လာခဲ့ရာ လူထုက များစွာဝမ်းသာကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် KIO သည် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကို အရှိန်မြှင့်၍ လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို သိရှိထားသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒေသခံ လူထုသည် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးကို နားမလည်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ သားသမီးများကို မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရယ်မှ လွတ်မြောက်စေလိုသည့် လိုလားတောင့်တမျှော်လင့်ချက်ကို KIO က ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဟု ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၉-၉-၂၀၀၅ ရက်နေ့ ဦးဇခုန်တန့်ယိန်း၏ ပန်ဝါနေအိမ်မှ သိမ်းဆည်းရမိသော ဘိန်းထုတ်များ
KIA တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ကြေးစားငှားရမ်းကာ တနေ့ တရုတ်ယွမ်ငွေ (၃၀၀) ပေး၍ ၎င်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရင်း တိုက်ပွဲဝင်စေခဲ့သည်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဒေသခံလူငယ်များကို မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ရာဘဆေးဝါးများကို လိုသလောက် သုံးစွဲနိုင်ရန် ပံ့ပိုးခဲ့ပြီး KIA တပ်ဖွဲ့တို့ကို တိုက်ခိုက်စေခဲ့သည်။ (ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသော ပြည်သူ့စစ်ဝင်၏ ၀န်ခံပြောဆိုချက်)
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ (၂၀)ဦး သည် မေလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် တရုတ်၊ မြန်မာ နယ်ခြားမှတ်တိုင်(၆)တွင် ခိုလှုံနေသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်(၆၀၀)ကျော်အား ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ယင်းပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မှ ဖမ်းဆီးရမိသူ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းမှ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားကာ ဦးခမ်းဘောမ်အား ဦးဆောင်စေခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ပစ်ခတ်မှုတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ထိခိုက်မှု မရှိခဲ့ချေ။
IDP များ ခိုလှုံသော နေအိမ်သို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပုံ
IDP များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဦးစီးသူ ဦးခမ်းဘောမ်
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် ယခုအချိန်အထိ မူးယစ်ဆေးဝါးကို သုံးစွဲနေရသူဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဘိန်းမဲ ကို နေ့စဉ်သုံးစွဲနေရသည်ဟု သူနှင့်နီးစပ်သည့် (အမည် မဖေါ်လိုသူ)ပုဂ္ဂိုလ်မှ သိရှိရသည်။ လွှတ်တော် တက်ရောက်စဉ်ကာလအတွင်း ခေါပုတ်(ကောက်ညှင်းဆန်ထောင်း)တွင် ဘိန်းမဲကို ထည့်ရောထားကာ ဧည့်အိပ်ဆောင်တွင် နေ့စဉ်စားသုံးနေကြောင်း ကြားသိရသည်။
၁၉-၉-၂၀၀၅ ရက်နေ့ ပန်ဝါနေအိမ်မှ သိမ်းဆည်းရမိသော ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း သုံးဆောင်သည့် ဘိန်းရှူကိရိယာများ
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ပစ်ခတ်ရန် ညွှန်ကြားသူ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၊ လက်နက် စက်ရုံ တည်ထောင်ကာ မှောင်ခိုရောင်းချသူ၊ မြေပေါ် မြေအောက် သယံဇာတများကို တရားမ၀င် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ၊ ကြေးစား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားကာကွယ်သူ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းသည် ယခုအခါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး အဖြင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မျက်လုံး ကလယ်ကလယ်နှင့် နေရာတထိုင်စာကို ပိုင်ဆိုင်နေ ရသည်။ သို့သော် သူ့ကို ထောက်ခံသောလူထုမှာ လုံးဝမရှိ။ သူ၏မိသားစုဝင်သာ ထောက်ခံသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ပို၍ ထူးခြားအံ့သြမဆုံးဖြစ်ရသည်မှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်(တင်းပြည့်) တစ်ဦးသည် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်ကို စတင်ဖေါ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုသော လွှတ်တော်တွင် အခန့်သားပါဝင်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ အနည်းငယ်သော အစွန်းအဖြားဖြစ်စဉ်အချို့သာ ဖြစ်သည်။ သူကဲ့သို့သော အတန်းအစားတူ၊ စရိုက်သူ၊ အာဏာပိုင်များနှင့် လက်ဝါးချင်းရိုက်၊ တီးတိုး စကားပြောဆိုနိုင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး အများအပြားလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ငွေကြေးပမာဏ၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အများပြည်သူသိရှိရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည် ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်သော ငွေကြေးဥစ္စာ ပစ္စည်းများသည် သမာအာဇီဝဖြင့် ရှာဖွေထားသည်ကို အာမခံချက်ပေးရန် လိုပေမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စရိုက်ကို အမြဲတစေ လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသော ပြည်ပအစိုးရများ၊ အဖွဲ့အစည်းများလည်း ဤကိစ္စကို ခရေတွင်းကျ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာ့လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းကို ငါးခူပြုံးပြုံး၍ ကြည့်နေသည်မှာ ကြာမြှင့်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။
at 12/16/2012 09:02:00 PM
▼ December 16 - December 23 (55)
ကချင်လူငယ်တဦးရဲ့ ၂၉ နှစ်တာ ဖြတ်သန်းမှု
အရာရှိကို ဓါးခုတ်ထွက်ပြေးသူ မြန်မာအစိုးရတပ်သား အလင...
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထား၊ KIO အကြောင...
မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား ကုန်တင်ရထား မိုင်းခွဲခံရ
တပ်မတော်၏ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ စစ်ပ...
ဒီဇင်ဘာ (၂၁) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေ...
အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ဆွေးနွေးကြရန် အမေရိကန်အစိုးရ ...
လိုင်ဇာဌာနချုပ်ကို သုံးဖက်သုံးတန်မှ စစ်ဆင်ရန် အစို...
ဒီဇင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့ ပြည်တွင်းစစ်သတင်းတိုများ
မိုးကောင်းမြို့ ကျောင်းသားများ ကြက်ဆူသီးစားမိ၍ ဆေး...
KIA တပ်ရင်း ၃ နှင့် ဖြစ်သော တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်...
BAWM HTE GASAT MYEN (10) JAN SI
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် WLB ဆက်လက် ရပ်တည်မည်...
ဒီဇင်ဘာ (၁၉) ရက် မနက်ပိုင်း အထိ ပြည်တွင်းစစ် အခြေအ...
အပြင်းထန်ဆုံး စစ်ဆင်ရေးအတွက် KIA ပြင်ဆင်နေ
ပန်းဝါမှ အစိုးရအမှတ် (၅၆) တပ်စခန်းကို KIA သိမ်းပို...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ကွင်းဆင်းလေ့လ...
ဘွမ်တောင် စခန်းတွင် ဗမာစစ်သား (၁၀) ဦးကျော်သေဆုံး
ဖါးကန့်ဒေသရှိ ကာမိုင်းရဲစခန်းအား KIA သိမ်းပိုက်
UNFC မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မီတီ တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း
မြန်မာကို ဆွီဒင်လက်နက်များ မပေးကြောင်း အိန္ဒိယငြင်း...
ကားမိုင်းမြို့ ရဲစခန်း သိမ်းပိုက်ခံရ
ဒီ(၁၄) တိုက်ပွဲ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခန့်ဖြုန်း
KIA HPYEN LA (3) RIM HKRUM
DUNG (5) MASAT YAN (5) HPYEN JAWNG YU POI
KIA၏ မဟာ ဗျူဟာမြောက် နိုင်ငံရေး တိုက်ပွဲ ကြီးများ
ခလရ(၁၀) ယာယီရင်းမှူး ကျဆုံး
ကချင်ဒေသတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ပိတ်ထားသည့်လမ်း ...
ကချင်တိုက်ပွဲ၌ အစိုးရတပ် စစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံ...
ကချင်တိုက်ပွဲ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအနီးအထိ ပြင်းထန်
မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်မရောင်းကြောင်း အိန္ဒိယအရာရှိ...
JARIT SHADAW (6) MAKAU KAW MYEN (50) RAM SI HKALA
စစ်ကူ မရောက်ခင် လက်နက်ကြီး များဖြင့် ပစ်ကူ ပေးနေရ
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ စစ်ရေးသုံးသပ...
လဂျားယန် တိုက်ပွဲမှ အစိုးရ သုံ့ပန်းနှင့် ရှရှား ဒံ...
မြန်မာရောက် ဆွီဒင်လက်နက်များကိစ္စ အိန္ဒိယ စုံစမ်းနြေ...